UMASIPALA UTUSE IQHAZA LABESIFAZANE ABASEMKHAKHENI WEZOKUXHUMANA – Sivubela intuthuko Newspaper
UMASIPALA UTUSE IQHAZA LABESIFAZANE ABASEMKHAKHENI WEZOKUXHUMANA
UMASIPALA wesiFunda saseHarry Gwala uyivale ngokungajwayelekile inyanga yabesifazane uNcwaba (August) njengoba uqophe umlando ongasoze walibaleka emlandweni waseNingizimu Afrika ngokuhlonipha abesifazane abayibambe ishisa emkhakheni wezokuxhumana phambilini obuwaziwa njengowabesilisa kuphela.
Lokhu kuhlonishwa kwabesifazane kwenziwe ngaphansi kweDistrict Communicators Forum (DCF) ebibheka abesifazane abavelele kwezokuxhumana kungaba kwi-science, ezobuciko, ezemidlalo njalo-njalo. Phakathi kwabesifazane abachonywe uphaphe legwalagwala lapha futhi abebeyizimenywa eziqavile nguNkk Nonala Ndlovu ongusomaqhuzu kwezokuxhumana eMnyangweni wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal, uNkz Ayanda Zuma oyiMenenja-jikelele kwezokuthengisa nokuxhumana eTrade and Investment KwaZulu-Natal noNkz Nomusa Phungula okhulumela iHhovisi likaSomlomo weSishayamthetho saKwaZulu-Natal. Zonke lezicukuthwane ezibalwe ngenhla zabelane nabebeyingxenye yalo mcimbi ngohambo lwazo emkhakheni wezokuxhumana nokuthi zifike kanjani lapho zikhona manje.
UNkk Ndlovu ongumakadebona kwezokuxhumana futhi osesebenzele uhulumeni isikhathi eside wabelane nabebelapha ngezinselelo ahlangabezane nazo emsebenzini wakhe. Uthe kunezikhathi lapho ayebhekana nengcindeni yokuphoqeleka ukuyeka umsebenzi engazi ukuthi uzoyosebenza kuphi kodwa phezu kwaleyo ngcindezi wakwazi ukwenza kahle umsebenzi wakhe eminyangweni ehlukahlukene kahulumeni.
UNkz Phungula okuvele ukuthi nguyena ongomncane kakhulu kwezokuxhumana KwaZulu-Natal uthe uhambo lwakhe kaluzange lube lula nokho ukuze afinyelele lapho ekhona. “Ezokuxhumana zigqame ngokwaziwa ukuthi kungumsebenzi wabesilisa bodwa kodwa lokho kakuvimbi ukuthi nathi besifazane sigqame kuwona futhi siwushiye umaka lapho sisebenza. Lesi yisikhathi sokuba nathi bantu besifazane siziveze ukuthi sikhona,” usho kanje.
UNkz Zuma ubonge isiFunda saseHarry Gwala ikakhulukazi ithimba leDCF ngokubahlonipha bengabesifazane ngalo mcimbi abebenzelwe wona futhi abebemenyiwe kuwona njengezimenywa eziqavile. “Uhambo alukho lula njengoba sihlanganisa iminyaka engu-26 sathola inkululeko njengoba sisazabalaza singabesifazane sizama ukuthola imikhakha yethu nathi. Singabantu besifazane masibhukuleni siziveze ukuthi sikhona futhi kukhulu esingakwenza,” ubeke kanje uNkz Zuma.
SIBUSISIWE ISANDLA ESIPHAYO KUNESAMUKELAYO
IQEMBU LEZEPOLITIKI LIFAKE ISANDLA KOSWELE